ယနေ့ခေတ်မှာ ကားသစ်တစ်စီးကို ဝယ်စီးတော့မယ်ဆိုရင် အများစုကတော့ မဝယ်ခင် ကားကို စမ်းသပ်မောင်းနှင်ကြည့်လေ့ရှိကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း အချို့ကတော့ ကားကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုကာ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ ဝယ်ယူလိုက်တာမျိုးလည်းရှိကြပါတယ်။
တကယ်တော့ ကားသစ်တစ်စီးကို မဝယ်ယူခင် ကြိုတင်စမ်းသပ်‌ မောင်းနှင်ကြည့်ထားခြင်းမှာ ကောင်းကျိုးများစွာရှိပါတယ်။ ဒီကောင်းကျိုးတွေထဲကအချို ့မှာ...
✔️၁) အမြင်နဲ့ လက်တွေ့ အတွေ့အကြုံ တစ်ထပ်တည်းကျ မကျ သိနိုင်ခြင်း
ကားသစ်တစ်စီးကို ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် online ကနေဖြစ်စေ၊ အသိမိတ်ဆွေတွေ ကနေဖြစ်စေ၊ ကား showroom ကို ကိုယ်တိုင်သွား၍ ဖြစ်စေ၊ ထိုနည်းလမ်းအားလုံးကို အသုံးပြု၍ဖြစ်စေ လေ့လာကြည့်ကြ မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ကားကို စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခြင်း မလုပ်ဖြစ် ခဲ့ပါက အမြင်အားဖြင့် သက်သောင့် သက်သာရှိမယ်လို့ထင်ရတဲ့ ကားတစ်စီးသည် တကယ်လက်တွေ့ မောင်းကြည့်မှ မိမိအတွက် သက်သောင့်သက်သာ မရှိလှတာမျိုး လည်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကားသစ်တစ်စီးကို မဝယ်ခင် မိမိနှစ်သက်ရာ ကားအမှတ်တံဆိပ်နဲ့ model တွေထဲကမှ မိမိအတွက် မောင်းနှင်ရတာသက်သောင့်သက်သာ အဖြစ်ဆုံးကားကို သိထားဖို့ ကားတွေကို စမ်းသပ်မောင်းနှင် လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။
မိသားစုသုံးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ကားဆိုပါက ဖြစ်နိုင်လျှင် ကားကိုစမ်းသပ်မောင်းနှင်သည့်အခါ မိမိရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကိုပါ တစ်ပါတည်းလိုက်ပါစီးနင်းကြည့်စေခြင်းက သူတို့အတွက် အမှန်တကယ်လုံလောက်တဲ့ နေရာအကျယ်အဝန်းရှိမရှိ၊ သူတို့အတွက် သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်မှုရှိ မရှိ နဲ့ ကလေးငယ်များ ရှိပါက ကလေးများအတွက်ပါ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီးလုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိ မရှိ ကို သေချာစွာ သိရှိနိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။
✔️၃)ကား၏ အလုပ်လုပ်ပုံ အသေးစိတ်ကို လက်တွေ့သိနိုင်ခြင်း
ကားတစ်စီ၏အချို့အစိတ်အပိုင်း များအလုပ်လုပ်ပုံသည် လက်တွေ့မောင်းနှင် ကြည့်မှသာ သိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ကား၏ accelerator သည် နင်းလိုက်တာနဲ့ အမှန်တကယ်သွက်လက်စွာ ကားကိုအရှိန်ပေးနိုင်ရဲ့လား၊ ကား၏ brake များသည် မိမိလိုချင်သလို အတိအကျ အလုပ်လုပ်ရဲ့လား၊ ကားကို ကွေ့ရ ဝိုက်ရတာ‌ရော သက်သောင့် သက်သာရှိရဲ့လား၊ ကားပေါ်ထိုင်ပြီးမောင်းကြည့်တဲ့အခါ အရှေ့ဘက် အနောက်ဘက် မြင်ကွင်းတွေသည်မောင်းတဲ့သူအတွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ မြင်နိုင်ရဲ့လား၊ ကားမှာပါဝင်တဲ့ functions တွေ ကရော မောင်းနှင်နေစဥ်မှာ အသုံးပြုရတာ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး သက်သောင့် သက်သာ ရှိစေရဲ့လား စတဲ့အချက်တွေသည် ကားကို အမှန်တကယ်စမ်းသပ်မောင်းနှင်ကြည့်မှသာ သိနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကားသစ်တစ်စီးဝယ်ယူဖို့ ဖြစ်စေ၊ မိမိကားအဟောင်းနဲ့ ကားသစ်တစ်စီးကိုလဲစီးဖို့စဥ်းစားနေသည် ဖြစ်စေ မဝယ်ခင်မှာ ကားတွေကို စမ်းသပ်မောင်းနှင် ကြည့်ထားခြင်းက တကယ် လက်တွေ့ကားဝယ်စီးတဲ့အခါ ရွေးချယ်မှုမှားယွင်းခြင်း၊ အမြင်နဲ့လက်တွေ့ အတွေ့အကြုံကွာနေလို့ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရခြင်းတွေကနေ ကင်းဝေးစေမှာ​ြဖစ်ပါတယ်။
လတ်တလော Stay at Home ကာလမှာ Mazda ကားတွေကို စမ်းသပ်မောင်းနှင်ချင်တယ်ဆိုရင်‌တော့ appointment ယူပြီး Mazda CX-5 ကားကို ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာ အိမ်တိုင်ရာရောက်အခမဲ့ခေါ်ယူ စမ်းသပ် မောင်းနှင်လို့ရတဲ့ အစီအစဥ်လေးလည်းရှိနေတယ်ဆိုတာ သတင်းကောင်းပါးပါရ‌စေ။
YGN: 09 897 837 897 & 09 799 247 986.
MDY: 09 409 424 954 & 09 456 111 105.
Online Booking here: https://www.mazda.com.mm/en/test-drive